WZX Seamless Muviri Muviri Muviri ShaPer Camisole ChampgeSear Uttinale Mugadziri | Wanzhanxing Apparel
Imba > Mhosva
WZX yakavhurika bust yepakati-kati honey straps bodysuit Wholesale mutengesi
Vakadzi seammy tummy kudzora pakati-matako emuviri slimming shapwear Wholesale
Ona kuti vatengi vedu vanoongorora sei zvigadzirwa zvedu
WZX Seamless Tummy Control Sping Cami Shapwear yemuchato wemuchato
WZX Seamless Muviri Muviri Muviri ShaPer Camisole ChampgeSear Uttinale Mugadziri
Vatengi vedu vanofarira kuti iyi shrumwear pfupi yakagadzikana uye iri nyore kushandisa. Tambanudza machira inopa chete huwandu hwakakodzera hwechisimba-chiuno chekuvimbisa pasina kunzwa kuomarara. Simudza Butt uye Kudzora Tummy / Chiuno Nomuzvarirwo. Chimiro chemuviri chakasimba chinochengetwa munzvimbo. Yedu yakakwirira chiuno shapwear pfupi kuti vakadzi vachasviba tummy uye kutonga muviri.
WZX - Professional Seamless fekitori yemugadziri
Shantou Wanzhanxing Apparel Co. Ltd. ndeye bsci certified fekitori, chinaWholesale Mugadziri, makambani epamusoro emakambani, kufukidza 13,500 mativi metres. Iyo fekitori inosimbisa pane iyo pfungwa yekudzivirirwa uye zvakatipoteredza kuchishandisa tekinoroji yeudiki kwazvo kupa masevhisi emhando yako. Isu takapaOem&Odm Services Kune vatengi kubva pasi rese, iyo USA, UK, CA, AU, de, etc. Chii chatingakuitira iwe:
1.Tinogona kugadzirisa zvigadzirwa zvinoenderana nezvaunoda
2.Tinogona kukurumidza kuita samples uye kuvanunura mumazuva manomwe.
3. Tinogona kugadzirisa iyo logo yebhendi rako.
4. Tinogona kugadzirisa mavara aunofarira.
5.Tinogona kuita kuwedzera-saizi chigadzirwa chine seamless tekinoroji.
6. Tinogona kugadzirisa maitiro aunoda.
Nekusanganisa rura rakasiyana nekemasiniki kusanzwisisika, chigadzirwa chine hunyanzvi hwekuita uye chimiro chine mavara.
Machina ari mumusangano wekusona anotorwa kubva kuJapan uye akashanda nevashandi vakasarudzika.
Isu tine logo inopisa yekudzima dhipatimendi, inopa yakagadziridzwa kupisa inopa solo services.
Senior dhizaini timu, ine yakazvimirira chigadzirwa chekuvandudza kugona, tora kugona kwemusika.
WZX Muviri Mugove Wemhando yeNjimendi ine majini ane maburi ekuvhara kubata kumeso kwako Tummy. Yakagadzirwa-yakakwira dhizaini inoderedza waistline kugadzira slimmer yechikadzi silhouette. Iyo imwe-chidimbu chikamu chakarongedzwa zvakanaka pasina zipper kana hove uye ziso mune yako tummy nharaunda, saka kukupa curve inotsvedza uye kukubatsira iwe kutaridzika zvakanaka mumapfekero!
Iyo yepakati-thigh bodytsuit yakawedzera kuita sezvinoita maficha sekudzvanya, wick Mabhandi asingaonekwe anodzora ane mukana wekusimudza pasi uye kuputika, nepo kubhururuka mudumbu, kumashure, chiuno uye zvigunwe zvehutachiona Iyi ndiyo yakakwana yekunyorovesa, yakareruka yakajeka chidimbu.-Kufemerwa uye kugadzikana kweganda rako uye miviri yakakosha nzvimbo.- Lightweight& Silky-Sleek Frabric = Yakazara Nyaradzo- inovimbisa hapana zvinooneka panties mitsara.- inogadziriswa tambo ine kumberi slider-Perfect chimiro chakapfeka chero chipfeko chine uhwu hwemuviri kumusoro kwevakadzi.
Aya ongororo yezvakanakisa-kutengesa kubva kune vatengi vedu (Online platform vatengesi). Shanu-nyeredzi ongororo kubva kune vatengi ndiro testamende kune iyo mhando yezvigadzirwa uye basa rakanaka rechikwata.
Iyi muviri inoratidzika kunge idiki, asi yakagadzirwa neyakaendeswa kuyamwiswa kwerudzi, ichishandisa iyo Super yakakwira, uye iyo-chidimbu chidimbu cheZipper kana ziso mune yako tummy nharaunda, kukupa iwe unyoro curve uye ita kuti utaridze zvakanaka mumapfekero!Yedu Seamgel Shapeggey inoumbwa nemuviri wako pasina kubhururuka butt yako, iyo inotora nguva yekucheka mesheni, uye simudza, uye simudza yako pachako chimiro, inowedzera yako silhouette isina Kurwira, zvinyoro-nyoro uye zvinyoronyoro kuumba yako butt, ichiita kuti iite yakazara, inotenderera uye yakasimba.
Wzx shapewear yakazvimiririra label Wholesale vabati vanotsvedza mafekitori ekupenga
Uyu wevakadzi kusevha mid-thighy bodytsuit inoshandisa yakakosha 360 ° Seamless Craft Dhizaini, haina kugadzikana, saka iwe unonyatso kukanganwa iwe wakapfeka chiuno chemucherechedzo. Muviri wakazara urikupfeka kupfeka pasi pemupfekero wako wemuchato / jumpsuits / jira rakasimba / skirts / jeans, hapana mitsara inoonekwa pasi pehembe dzako. Kugadzikana kwakasimba kwakasimba uye tummy control, kukupa iwe smoother curve.
Wzx seamless tummy control shapwear gadzira muviri styming mutengesi underwear
Aya mashura asina magariro bras akagadzirwa ne nylon uye spandex. Machira akagadzikana uye akapfava, oga pinda neganda rako, pasina kusagadzikana, hapana kupinza, hapana kana kuronga, uye kukwenya.
WZX Wholesale Muviri Muviri Zvinoshamwaridzana Prace Label Shabog
Kugadzikana kudzora kutsvedza kuputira mabhureki, kuratidzira sexy makumbo, anti-skid strip dhizaini mukati mehemu, kudzivirira siketi kubva kumusoro kumusoro uye pasi. Aya mapfekero akazara akakwana uye maumbirwo erudo, chiuno, kumashure, uye zviuno.
Wzx kufema dhigi slimming yakanakisa seamless chimiro
Seamless dhizaini ine kutambanudza uye kufema machira eternity shapeggear, dzivirira goutffs Anofanira-kuve akakosha, pfeka iyo mennity shape yega zuva rega rega pasi pemachira kana masiketi, batsira zvinhu zvakanyanyisa uye hazvina kumbobvira zvaita dambudziko nekukanda pasi. Chakavanzika chakagadziriswa chiuno chakakodzera mudumbu